पत्रकार जीवन पराजुलीद्वारा लिखित पुस्तक ‘क्लोज-अप’ सार्वजनिक
10.0K views • 7.8K shares
397 views • 14 shares
ज्याकलिनको गोप्य तस्बिर बाहिरियो
1.1K views • 9.0K shares
स्वाभिमानी डा. करण सिंह ठगुन्ना
366 views • 23 shares
डा. करण सिंह ठगुन्ना उहाँ ठूलो र सुन्दर होइन असल र सक्षम हुनुहुन्छ । राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, स्वाभिमानी हुनुहुन्छ, भलाद्मी हुनुहुन्छ । ठूलाहरूमा देखिने स्वार्थ, अहं र केही हदमा पाइने मानवीयताको अभाव सायद उहाँमा छैन । साना ठूला सबैसँग समान व्यवहार र सादा–परिश्रमी जीवन संभवतः उहाँको जीवनदर्शन हो भन्ने अनुभव भयो । डा. ठगुन्ना विदेशमा आफ्नो अध्यापन सकाएर विदेशी भुमीमा पनि आफ्नो नाम उच्च श्रेणीमा हुँदाहुँदा नेपाली भुमीमा आएर आफ्नो जिवन र कर्म आफ्नो मातृभुमीमा अर्पण गर्नुभएको छ । The University of Alabama बाट Doctor of Philosophy – PhD, Quantitative Finance and Applied Mathematics अनि The University of Alabama बाट Master’s degree, Applied Mathematics अध्ययन गर्नुभएका डा. ठगुन्ना विश्वका शक्तिशाली र विकसीत मुलुकहरु अमेरीका, यूरोप जस्ता मुलुकमा पनि आफ्नो नाम उच्च श्रेणीमा राख्न सफल बन्नुभएको छ । नेपाली भुमीमा क्षमतावान व्यक्तित्वको धेरै खाँचो छ । ज्ञान नै सर्वशक्तिमान हो । ग्लोबल कलेज ईण्टरनेशनलमा प्रिन्सिपलको ओहोदामा रहेर आफ्नो मातृभुमीमा रहि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभुत्व जमान सफल डा. करण सिहं ठगुन्ना आफ्नो दैनिकी कर्म गरी विताउदै आउनुभएको छ ।
डा. ठगुन्ना शिक्षक देखि विद्यार्थी, नेता देखि कार्यकर्ता, कलाकार देखि सल्लाकार, विशिष्ट श्रेणीमा रहेका हरेक क्षेत्रका व्यक्ति अनि देश विदेशमा रहनुहुनेण् सम्पूर्ण शिक्षित वर्गहरु सँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नो दक्षतालाई सार्थक बनाउन सफल रहनुभएको छ । ज्ञान ले नै भविष्यको सहि मार्गदर्शन गर्न सक्छ । ज्ञानी नै सच्चा सक्षम प्रामाणित हुन्छ । बिद्धान्, अब्बल, पारदर्शि शब्द वा सुनाईमा मात्र सिमित होइन बास्तविकतामा अब्बल त्यो हो जो ज्ञानले भरिपूर्ण हुन्छ ।
मेरो जिवनको शिलालेखमा परिश्रम, कर्म नै जिवन हो भनेर खोपिएको छ । २ दशक छुन लाग्यो आजसम्मको यात्रामा धेरै अनुभव प्राप्त भयो । संसारका ठूला उद्योग, व्यापरीसँग नजिकिएर कर्म गर्ने मौका पाए । उक्त क्रममा उच्चवर्ग, बुद्धिजिवी, सक्षम लिडरसँग नजिकीने मौका मिलेर नजिकबाट लिडरको क्षमता र व्यवहार नियाल्ने अवसर पाए । सुनजस्तै देखिने वा सुनकोशी नदिमा सुन पाइने भएकोले सुनको अर्थमा सुनकोशी नदि हिरण्य रहेको होइन । अस्तित्वबोधको आकाशबाट आएको रापिलो सत्यताको चम्किलोपनतालाई छिचोल्दै हिरण्येश्वर पर्वतबाट निस्कीएर हिरण्य कौशिकी भन्ने नाम रहन गएको रहेछ । पृथ्वीनारायण साहले नेपाल एकिकरण गरे रे । चित्रमा एउटा औंला उठाएको मात्र देखेर दङ्ग परिन्छ । तर उहाँको विगतको ध्यान, तपस्याको बोध मात्र उहाँलाई र यो देशको माटोलाई मात्र थाहा छ । बनाउन धेरै गाह्रो छ बिग्रन त तुरन्छ एउटा डोजरले गर्ने काम हो ।
सत्य, चन्द्र र सूर्य कहिल्यै लुक्दैन । कोहिली र कागको अन्तर देख्दा नदेखिए पनि बास्तवमा धेरै छ । अरुलाई जस्तै मलाई पनि मेरो कर्मथलोको माया लाग्छ र चिन्तापनि किनकी भोली पनि मलाई यहि थलोमा कर्मको ध्यान गर्नुछ र यहिबाट प्राप्त ज्ञानले अगाडि बढ्नुछ र बरदानले जिवीकोपार्जन गर्नुछ । कर्मथलोको सान होस् मान होस्, नाम होस् र भविष्य होस भन्ने चाहाना हुन्छ । आफुले टेक्ने भुमी नचर्कियोस्, नफाटोस् भन्ने इच्छा हुन्छ । लिडर त्यो बन्न सक्छ जो अरु ले लिडर भनि स्वीकार्छ । राजनितीक होस वा सरकारी वा व्यक्तिगत राष्ट्र होस् या व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा सक्षम लिडर को खाँचो रहन्छ । सहि मार्गदर्शनको जरुरी हुन्छ । लिडरलेनै त्यो पिलर हो जसले पूरै बोझ उचालि ठिगं उभिएको हुन्छ । जुन क्षेत्रमा काबिल लिडर रहन्छ त्यहाँ नै उन्नती हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ र त्यहाँ वरिपरी मात्र सुखको राघ चारैतिर फैलिरहन्छ । सफल र उज्जवल भविष्यको चित्र चम्किरहन्छ ।
काठमाडौं – नेपाली चलचित्रका केही आयाम र पात्रहरुमा आधारित गैरआख्यान पुस्तक ‘क्लोज-अप’ सार्वजनिक गरिएको छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच चलचित्र पत्रकार जीवन पराजुलीद्वारा लिखित पुस्तकको सार्वजनिकीकरण गरिएको हो । पुस्तकलाई अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर, निर्देशक तथा अभिनेत्रीद्वय दीपाश्री निरौला र झरना थापा, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, निर्देशक नारायण पुरी, कवि एवं फिल्म निर्देशक राजेन्द्र शलभ लगायतले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका हुन् ।
फिल्म निर्देशक तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाले सम्पादन गरेको पुस्तक ३ सय ६३ पृष्ठको छ । ‘अनि सुरु भयो नेपाली चलचित्र उद्योग’, ‘राजेश हमाल स् युगदेखि युगसम्म’, ‘भारतबाट नेपाली चलचित्र स् सीमानाले अलग, भाषा र सिर्जनाले एक’, ‘साँघुरो छ आधा आकाश’, ‘चलचित्र निर्देशनमा चौथौं अंग’ र ‘अन्त्यमा’ गरी ६ खण्डमा विभाजित पुस्तकमा विभिन्न कालखण्ड र ति कालखण्डका चलचित्रकर्मीहरुको अनुभव, भोगाई र संघर्षलाई समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा निर्देशक राजेन्द्र शलभले पुस्तकमाथि टिप्पणी गरेका थिए । उनले ‘क्लोज(अप’ एउटा राम्रो दस्तावेज भएको बताउँदै नेपाली चलचित्रलाई नजिकबाट जान्न र बुझ्न चाहनेहरुका लागि उपयोगी हुने धारणा राखे । उनले पुस्तकको अर्को भाग पनि आउन आवश्यक रहेको र छुटेका अन्य पात्रहरुका अनुभवलाई समेट्न लेखकलाई सुझाएका छन् ।
कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले डिजिटलको युगमा धेरै कुराहरु इन्टरनेटबाट थाहा पाउन सकिने भएपनि किताबमा जस्तो विश्वास आफूलाई अरुमा नलाग्ने बताइन् । ‘किताबको आफ्नै महत्त्व छ । आजका दिनमा पनि म विश्व सिनेमाको बारेमा जान्न किताब नै खोज्ने गर्छु । किनकि, किताबमा म वास्तविकता भेट्छु । ‘क्लोज(अप’ले पनि नेपाली चलचित्रलाई थप नजिकबाट चिनाउनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु,’ उनले भनिन् ।
निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाले ‘क्लोज(अप’ले नेपाली चलचित्रकर्मीलाई प्राण भरिदिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । निर्देशक दीपाश्री निरौलाले भने ‘क्लोज(अप’लाई आफूले नेपाली चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरुको दस्तावेजको रुपमा लिएको धारणा राखिन् । उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘चलचित्रकर्मीहरुको यात्रा लाइमलाइटमा रहँदासम्म मात्र देखिन्छ । लाइमलाइटमा हुँदासम्म सबैले वाहवाही गर्छन् तर त्यसपछि हामी थियौं र १ भन्ने खालको स्थिति छ । ‘क्लोज(अप’ले चलचित्रकर्मीलाई लिपिवद्ध गरिदिएको महशुस गरेकी छु ।’
त्यस्तै, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दाहालले ‘क्लोज(अप’लाई उत्कृष्ट र सुन्दर सुरुवातको रुपमा ब्याख्या गर्दै भने, ‘नेपाली चलचित्र पत्रकारिता सतहीमात्र भएको अवस्थामा विश्लेषणात्मक लेखसहितको पुस्तकले चलचित्र पत्रकारितालाई नै नयाँ ढंगबाट लैजाने विश्वास लिएको छु । पुस्तकले नेपाली चलचित्रको समग्र इतिहास र पात्रलाई समेट्न नसके पनि भोलीका दिनमा अझ फराकिलो रुपमा पुस्तक ल्याउन म लेखकलाई आग्रह गर्छु ।
काठमाडौं- कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको विद्यालय खोल्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)को आइतबार बसेको बैठकले आगामी फागुन १ गतेदेखि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सीसीएमसीसीका प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो
‘विद्यालय फागुन १ गतेबाट खोल्ने । विद्यालय खोल्दा खेरी १२ वर्षमाथिका बालबालिकाको लागि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘१२ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालकालिकाको लागि आलोपालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरि सिफारिस भएको छ ।’कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोन सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत पुस २५ गते बसेको सीसीएमसीसीको बैठकले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।कोभिड तेस्रो लहरका कारण माघको पहिलो सातादेखि विद्यालय बन्द छन् ।
पहिलो चरणमा माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि सीसीएमसीसीकै सिफारिसमा माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा लागू जोरबिजोर प्रणाली हटाउन पनि सीसीएमसीसीले सिफारिस गरेको छ ।कोरोना सङ्क्रमणदर घट्दै गएको भन्दै सीसीएमसीसीको आज बसेको बैठकले जोरबिजोर हटाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता नेपालले जानकारी दिनुभयो । अहिले जोरबिजोर प्रणाली निजी सवारी साधान र ट्याकसीहरुमा लागू छ ।त्यस्तै, रात्रिकालीन व्यवसाय डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, सिनेमा हल, जिम खानालगायत फागुन १ गतेदेखि राति १० बजेसम्म सञ्चालनको लागि पनि सीसीएमसीसीले सिफारिस गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौ - बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिसको एउटा गोप्य तस्बिर बाहिरिएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै​ ज्याकलिन र सुकेश चन्द्रशेखरसँगको तस्बिर बाहिरिएको हो । गोप्य तस्बिर बाहिरिएपछि अभिनेत्रीले तस्बिरको विषयमा ‘स्टेटमेन्ट’ नै जारी गरेकी छन् । ज्याकलिनले लेखेकी छन्, ‘यो देश र यो देशका जनताले मलाई धेरै माया दिएका छन् । यसमा मिडियाका सबै साथीहरु पनि सामेल हुनुहुन्छ । म यतिबेला निकै नराम्रो समयबाट गुज्रिरहेकी छु । मलाई आशा छ म छिट्टै यो तनावबाट मुक्त हुनेछु ।’
उनले मिडियालाई आफ्नो बाहिरिएको गोप्य तस्बिर भाइरल नबनाइदिन आग्रह गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘म मिडियालाई मेरो व्यक्तिगत कुरालाई ध्यान दिएर मेरो व्यक्तिगत तस्बिर भाइरल नबनाइदिन आग्रह गर्छु । तपाईंहरु आफ्नो प्रिय र नजिकको व्यक्तिसँग यस्तो व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न ।’ ज्याकलिनको केही समयअगाडि मात्रै ठगी मुद्दामा सुकेश चन्द्रशेखरसँग नाम जोडिएको थियो । उनलाई ठगी गरेको आरोपमा सोधपुछ पनि भएको थियो ।
दुनियाँलाई उल्लु बनाएर खानसकिन्थ्यो तर आफैलाई लाज लागेर आयो
8.1K views • 345 shares
आफु भन्दा साना साना भाईबहिनिहरूले साथी भन्दै हिडछन्, मेरै उमेरका तर दारी कपाल फुलेका आधा उधी तालु खुईलेका र गाला चाउरी परेका साथीभाईहरू, मित्रहरूले भाई भन्दै हिड्छन, उहाँहरूलाई थाहा नभएर होला अरूलाई खसालेर बोल्दा आफु भयंकर ठुलो भएको ठान्छन जुन एउटा घातक रोग जस्तो अपाहिज सोच पनि हो । कतिपय कुरा सुन्न र सहन नराम्रो महशुस भयपनि आँफु स्लिम फिट भएकोमा खुशी लाग्छ ।
प्रायजसो नेपालीहरूले उमेरको अड्कल यसरी गर्ने कुरा पुष्टिभएको छ भुडी लायको, दारी कपाल पालेको अनि फुलेको साथै तालु खुईलेको सिद्धै दाई पर्छन अरू त म जस्तै कुरो बुझिहाल्नु भयो नि ।
कहिल्य काँहि त यस्तो सोच आउछ कि मैले पनि स्लिम फिटको अवार्ड आयोजना गरेर त्यहीँ माथी बर्षकै उत्कृष्ट य होईन होईन नेपालकै उत्कृष्ट अझै पनि चित्त बुझेन यो त मेरै गोजीको अवार्ड पो त मैले जे गर्छु त्यो सबै हाम्रो कलाकारीता क्षेत्रले कस्तो मज्जाले ट्वाल्ल परेर हेर्दै ताली बजाउदै बधाईको ओईरो लाग्दा कति मज्जा आउछ त्यसैले (International Award) अन्तराष्ट्रिय अवार्ड भनेर नाम जोडे पछि नेपालीहरूको लागी ओस्कार अवार्ड भन्दा पनि ठुलो अवार्ड भैहाल्यो नि रह्यो कुरा जुरीहरूको अवार्ड आयोजना गरेको सुन्ना साथ उल्टै पैसा तिर्न आउनुहुन्छ पैसा पनि टन्नै कमाई हुने अझै अमेरीका जाने हैसीयत भयका जुरीहरूले निर्णय गरेको कुरा नेपाली गीत संगीत तथा चलचित्र उध्योग का कलाकारहरू साथै बिभिन्न संघ संस्थाहरूले कसरी नकार्न सक्थे र बिचरा किनकि यस्ता कार्यक्रमहरू त नेपालमा भयको धेरै राम्रो हो हामी त खुशी हुनु पर्छ अझै यस्ता कार्यक्रम त अझै हुनु पर्छ भन्दै उल्टै बधाई माथी बधाई यसरी दुनियाँलाई उल्लु बनाएर InternationalSlimFitAward जितेरै देखाईदिन सकिन्थ्यो तर समस्या यस्तो गर्न आफैलाई लाज लागेर आयो सबै भन्दा ठुलो उल्लु आफै भईन्छ भन्ने कुराले झस्क्यायो त्यैसैले मैले अवार्ड नगर्ने घोसणा गर्दछु ॥
सकारात्मक सोचले नै समाजसेवा गर्न मानिसलाई प्रेरित गर्दछ ः राधेश्याम मिश्र (अध्यक्ष, वातावरण मैत्री समाज)
5.6K views • 3.5K shares
- वातावरण मैत्री समाज भनेको एउटा त नामले नै धेरै कुराहरुको पुष्टि गरेको छ । वातावरणलाई मैत्रि कसरी राख्ने वातावरण मैत्री समाजको परिकल्पनालाई कसरी साकार गर्ने भन्ने उदेश्यले अगाडी बढेको यो संस्था भएको कारण नै यसको नाम वातावरण मैत्री समाज भएको हो । यसको स्थापना २०७५ सालमा भएको थियो र यसले वातावरणलाइ एक दम स्वचछ सफार हराभरा गर्ने र सामाजिक कार्यहरु समेत गर्ने उदेश्य लिएको छ ।
- वातावरण मैत्री समाज यसको नाम भएता पनि यसको प्रमुख उदेश्य वातावरणसंग सम्बन्धित हुन्छ नै तर यसले आफ्नो अन्य कार्ययोजना अन्तर्गत विभिन्न किसमका सामाजिककार्यहरु समेत गर्दै आईरहेको छ ।
- वातावरणको हिसावले हेर्दा हरेक शनिबार सरसफाई कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गर्दछौं र बृक्षारोपणको कार्य पनि हाम्रो प्रमुख उदेश्यमा पर्ने गर्दछ । बैज्ञानीक तवरले हेर्दा पनि जिवनमा एकजना व्यक्तिलाई पाँच ओटा रुखको आवश्यकता पर्दछ जिवन कालमा भन्छ र त्यसैले हामी विरुवा रोप्ने कार्यमा प्रमुख रुपमा ध्यान दिने गर्दछौं ।
- सबैभन्दा पहिला त कार्यमा हिड्नु नै गाह्रो र त्यस माथी झन सामाजिक कार्य त निकै कठीन कुराहो तर आफुलाई कार्य गर्न मै तल्लिन राख्यो भने विस्तारै समाज सेवामा आफुलाई ढाल्दै लग्यो भने सहज हुदै जान्छ अथवा भनौ बानी पर्दै जान्छ र समाज सेवा गर्न सजिलो हुन्छ र काम गर्ने वातावरण सहज बनाउदै जान्छ ।
- यो सामाजिक कार्यमा सन्तुष्ट हुने भन्दा पनि मेरो अनुभवले भन्दा पनि पहिला हामीले सामाजिक वातावरण छ कि छैन अथवा म सामाजिक कार्य गर्न सक्छु की सक्दिन भन्ने कुराको वातावरणमा उसले सामाजिक कार्यहरु गर्न सक्दैन र उसले त्यो कार्यमा हिड्नु नै उसका लागि ठुलो कुरा हुने गर्दछ । यदि आफु भित्र पनि सामाजिक कार्य गर्ने वातावरण छ भने उसले सहज रुपमा काम गर्न सक्छ ।
- व्यक्तिगत हिसावले भन्दा मेरो आचरण नै सामाजिक कार्य गर्ने रहेका कारण म पहिला देखिनै सन्तुष्ट नै छु ।
- सामाजिक काम चै पहिले देखि गरिसकेको भएर अव भन्नु पर्दा अहिले त म सन्तुष्ट छु तर पहिले म सन्तुष्ट थिईन । अव पहिले सुरु सुरुमा कत्ति दिने र सहयोग गर्ने काम मा मात्रै हिंडिराख्छ भन्ने कुराहरु पनि आउने गर्दर्थे । यी विचारहरुले गर्दा सामाजिक वातावरणलाई समेत प्रभाव पार्ने रहेछ र यसले गर्दा केही असन्तुष्ट र दुःखहरु हुन्थे । पछि विस्तारै विस्तारै सबैले बुझदै गए यसको आचरण यस्तै हो बानी र व्यवहार यस्तै हो निरन्तर यसैमा लागिरहेको छ, अव यसलाई असहज भन्दापनि काम गर्ने वातावरण बनाई दिनु पर्छ भन्ने सोचेर केही सहज बनाई दिए पछि यसले सहज रुपमा काम गर्छ भनेर सहयोग गरिसके पछि वातावरण सहज हुदै जान्छ ।
- आयश्रोतको विषय सबै भन्दा गाह्रो विषय हो र सम्बन्धलाई कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा पनि आर्थिकसंगै जोडिएको हुन्छ । आर्थिक पक्षलाई संगालेर राख्नु भनेको सबै भन्दा ठुलो जिम्मेवारी जस्तो हुंदोरहेछ । आर्थिकको लागि सामाजिक क्षेत्रमा हिड्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ । हामी सामाजिक क्षेत्रमा कामगर्ने मान्छे हरु कुनै न कुनै तरिकाहरु अपनाएका हुन्छौं यो काम यसरी गर्ने पर्छ र समाजलाई हामीले यो कुरा यसरी दिनु पर्छ भन्ने ठाने पछि हामी जम्मा भएर आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नै खल्तीबाट निकाल्ने गर्दछौं तर त्यत्तिले मात्रै संम्भव नभएमा हामी आफ्ना केही प्रस्तावहरुलाई लिएर वडा तथा नगरहरुमा जान्छौं र सहयोगका हातहरु फैलाउछौं । त्यहाँबाट भएको सहयोगलाई लिएर पनि हामी सामाजिक कार्यहरुलाई अगाडी बढाउछौं ।
- मेरो व्यक्तिगत आयश्रोतको पाटो भनेको मेरो आफ्नै व्यवसाय छ । सानो छ व्यवसाय, तर म समाज सेवाको लागि आफ्नो तर्फवाट आफुले सहयोग गर्नु परेको अवस्थामा परेको रकम सहयोग गर्न सक्ने हैसियत वनाएको छु । यसर्थ मेरो व्यवसायले मलाई समाजसेवा गर्नको लागी मद्धत पुर्याएकैछ ।
- सुरु सुरुमा सामाजिक कार्यमा गहिरिएर एकदम पर सम्मको लक्ष लिएर हिड्दा खेरी बाटोमा धेरै तनावहरु आउने रहे छन् त्यो बेला यत्ति सम्मकी बेकारमा मैले यो क्षेत्रमा हात हालेछु भन्ने पनि हुँदोरहेछ । तर अव विच बाटोमा पुगी सके पछि फर्कनु कसरी ? वा नफर्कनु यत्ति गाह्रो छ भन्ने विषयले साह्रै विचलीत भँईदो पनि रहेछ । अव त्यो विचबाटोमा उभिसके पछि कुन धार समात्ने भन्ने कुरा, फर्कने वा अगाडी बढ्ने भन्ने कुरालाई समयले निर्धारण गर्दोरहेछ । अर्को कुरा त्यो मजधारमा उभिएको बेला कसैले यदि मुस्कान दियो, धाप मारि दियो अथवा भनौ केही उत्प्रेरित गर्यो भने पनि अगाडी बढ्नको लागी सजीलो हँुदोरहेछ । मेरो कुरा गर्दा मेरोलागी पनि यहि कुरा भयो म यस क्षेत्रमा निरन्तर अगाडी बढीनै रहें , यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो वातावरण मैत्री समाज । र म यसवाट अर्थात समाजसेवाको कार्यवाट सन्तुष्ट छु ।
- मैले पनि त्यस्तै सुनेको छु, अव जो एकदम गहिरिएर अथवा मिहेनतका साथ समाजसेवामा लागेको हुन्छ त्यसको प्रतिफल कहिले चाँडो आउँछ कहिले ढिलो आउँछ र यसको आश गर्नै मिल्दैन कुनै ठाउँमा चाँडो प्रतिफल आउँछ भने कुनै ठाउँमा ढिलो आउँछ । समाज सेवा भनेको एकदम विसुद्ध समाजिक कार्य हो यो आत्मसंग जोडिएको हुन्छ जो निरन्तर लागि रहन्छन् तिनीहरु निरन्तर चलिरहन्छन् र यसमा खेतालाको कुरै छैन । खेताला भनिएका समाजसेवी उनिहरु एक तरंगको रुपमा मात्रै हुन्छन् एकछिन आउँछन् र जान्छन् । तर निरन्तर लागिरहे व्यक्तिहरु सदावहार हुन । समाज सेवामा लागि रहेको व्यक्तिहरु हामीलाई पनि ध्यान दिन्छन् है भन्ने हिसावले काम गर्दै जान्छन्, निरन्तर काम गर्दै जानेहरुको लागी भने प्रतिफल केही ढिला आउला तर खहरे झै एकैचोटी हाईलाईटमा आउने खेताला समाजसेवीहरु चाँडै हराएर पनि जान्छन् । समाजसेवा सकभर त्यसरी नगरकै राम्रो ।
- यो अत्यन्तै गहिरो प्रश्न हो । सम्पुर्ण जिवन के रहेछ भन्दा आफ्नो कथा भएको प्राणीले मलाई के लक्ष्य र उदेश्यले यो प्राण अथवा जिवन दिएको हो भन्ने विषयमा खोज गर्नु पर्दछ र यो खोजी सकेपछि मात्रै उसले आफ्नो उदेश्य पाउँछ त्यो उदेश्य जिवनको विषयमा पनि हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै पनि विषयमा हुन सक्छ र यसै विषयमा समाजसेवालई जोड्दा समाजसेवा भनेको आत्मैबाट स्वेच्छाले सहयोग गर्ने चाहाना नै समाजसेवा हो अथवा भनौ आफुले देखेको चिजबस्तुलाई मन भित्रैबाट महसुस गर्छ र त्यस ठाउँ परिवेशमा अव एउटा व्यक्तिले स्वयम् आफै उभिएको देख्छ अथवा देख्न खोज्छ भने उसले त्यसै प्रति काम गर्ने सकारात्मक सोचले समाजसेवा तर्फ उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ र त्यो उत्प्रेरित गर्ने भावलाइ नै समाजसेवा भनिन्छ जस्तो लाग्छ । जता भए पनि जसरी भए पनि जे भए पनि हामी सबैले एक शुन्दर जिवन पाएका छौं र हामीलाई दिएको जिवनले हाम्रो समाजलाइ सहि दिशातर्फ लैजान सक्यौ भने मात्रै हाम्रो जीवनको सार्थकता भेटिन्छ र सुन्दर समाजको निर्माण गर्नसक्छौं ।
प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठको लाईफ प्रिन्सिपल
1.1K views • 19 shares
परिश्रमको फल पक्कै पनि मीठो नै हुन्छ । दु:ख र हण्डरले जीवनमा परिश्रम गर्न सिकाउँछ पनि । एउटा विपन्न परिवारमा जन्मिएका राजन श्रेष्ठको जीवनमा ठयाक्कै यो कुरा लागु हुन्छ । हुन त खोतल्दै जाने हो भने अनगिन्ती संघर्शका गाथाहरु भेटिन्छन् । यद्यपी परिवेश अनुरुप छुट्टाछुट्टै कथा व्यथाहरु भेटिन्छन्, भोगाइहरु देखिन्छन् ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका १३ चुनिखेल टुसालमा जन्मिएका राजन श्रेष्ठले परिवारको विपन्न आर्थिक अवस्थाका कारण आफ्नो बाल्यकाल खेतीपाती , मेलापात र ज्यालापर्म गर्दै बिताए । विद्यालय पढ्दा नै ज्याला मजदुरी गरे । उनले हातका ठेला फुट्दा हातमा रुमाल बाँधेर पनि खेत खने ।यसरी सानै उमेर देखी परिश्रम गर्न अभ्यस्त राजनलाई हरेक कुरामा मेहनत गर्ने आदत नै पर्‍यो ।फलत: उनी विभिन्न उतारचढावकाबीच जीवनमा सफलता तर्फ अग्रसर हुँदै गए । ३१ वर्षीय श्रेष्ठले यस माझमा सेक्युरिटी गार्ड हुँदै विद्यालयको/कलेजको प्रिन्सिपल तथा युवा उधमी बनेका छन् ; जो धेरै युवाहरूको लागि उदाहरण बनेका छन् । उनी कपनमा रहेको पायोनीयर पब्लिक स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन । त्यसो त उनी विभिन्न कला,साहित्य, सामाजिक र शैक्षिक संघसंस्थामा पनि आवद्व छन् । बिशेषत गत साल कोभिडको महामारीको समयमा पनि मनास्लु कलेजको स्थापना गरेर आफ्नो नेतृत्व कौशल देखाउन सफल भएका छन्। हरदम साथ दिने यस्तो टिम भए चाँडै मनास्लु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक स्थापित कलेज बन्ने दाबी समेत गरे॥
पढाइमा अब्बल राजनले स्कुल पढ्दादेखि नै घरबाटै होम ट्यूशन पढाउँथे । जसको बदलामा उनलाई कोहि चामल, आलु त कोहि कसैले पैसा पनि दिने गर्दथे । राजनले होम ट्यूशनलाई निरन्तरता दिँदै इन्स्टिच्यूटमा पनि पढाउन थाले ।
एसलसीमा स्कुल टप गरेका राजनले प्राय: कलेजहरुमा छात्रवृत्तीमा नै अध्ययन गर्ने अवसर पाए । स्तुपाको सुरक्षा गार्डबाट जागिरे जीवनको सुरुवात गरेका राजनले कुनै काम सानो ठूलो नभनी काम गरे । यस दौरानमा उनले सुन पसल र रेष्टुरेन्टको अकाउन्टेन्ट भएर पनि काम गरे ।
केभ्स कलेजमा प्लसटु अध्ययन गरेका राजनले बज्र इन्टरनेशनल कलेजबाट स्नातक उत्तीर्ण गरे । स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययन गर्दा उनले केहि समय विभिन्न संघसंस्थामा पत्रकारिता तालिम लिए भने विभिन्न विद्यालयमा पत्रकारिता तालिम पनि दिए ।
पत्रकारिता र अग्रेजी विषयमा स्नातक गरे पछि राजनले युनिभर्स कलेजबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरे। त्यसपछि आइएसआरबाट एमफिल पनि गरे ।
विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव संगालेका राजनले २०६४–६५ बाट अंग्रेजी शिक्षकको रुपमा काम गर्न थाले । गोकर्णेश्वर स्कुलबाट अध्यापन गराउन थालेका राजनले नेशनल आइडियल स्कुल , कुपण्डोलमा रहेको नाइटिङ्गेल स्कुल, नर्सिङ कलेजमा केहि वर्ष अंग्रेजी पढाए । सो क्रममा उनले विद्यालयमा हुने अतिरिक्त कृयाकलाप प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । त्यसपछि जाउलाखेलमा रहेको डिएबि स्कुलमा सिनियर अंग्रेजी शिक्षक बने । त्यसबेला उनले उक्त स्कुलको वेभसाइटमा राख्ने समाचार सामाग्री संकलन र सम्पादन पनि गर्थे ।
उनी भन्छन्, ‘सुरुवातमा कपनमा सञ्चालन भइरहे पनि कमजोर अवस्थामा रहेको पायोनीयर पब्लिक स्कुल २०–२५ जना मिलेर लिने सहमती भयो । तर पछि ८ जनाले २०७२ मा स्कुल लियौँ । अहिले पाँच जना मात्रै छौँ । त्यतिबेला कतिपय मानिसहरुले गलत निर्णय लिनुभयो भन्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।‘ अहिले पायोनियर र राजन एक पर्यायवाची बनेको छ। बुढानिलकण्ठमा अतिरिक्त कृयाकलाप र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उदाहरण बनेकाे छ। योग्य र अनुभबी युवा पुस्तालाई संस्था बेलैमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गरे हरेक संस्थाले गति लिने विश्वास गर्छन्।
राजन आफू जुन संस्थामा संलग्न हुन्थे त्यहाँ लगनका साथ काम गर्थे । विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालक साथै व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा पनि खरो उत्रन्थे राजन। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफुले पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरेरै छाड्ने बानी उनमा थियो र यद्यपी छ ।
उनी भन्छन्, मैले पायोनीयरको मुहार फेर्ने गरि मेहनत गरेको छु । छुट्टै मन्टेश्वरी खोल्ने र प्लसटु चलाउने योजना मूताबिक मनास्लु जन्मिएको हो। आफ्नो करियर पुरै दाउमा राखेर, उच्च जोखिम मोलेर, आंटले यो मनास्लु कलेजको परिकल्पना आफु र आफ्नो अत्यन्त मिलनसार साथी गेन्द् लामाले गरेको बताए। पायोनीयरका विद्यार्थीहरु देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल प्रदर्शनका लागि विभिन्न राष्ट्रमा गएर सफलता हासिल गरेको कुरा जगजाहेर नै छ भन्छन् ।
उनी भन्छन् , ‘मेरो बुवाले धेरै पढिस भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो भने हजुरबुवाले ८ कक्षामा पढ्दा नेपाल बस्ने भए पढाई पुग्छ भन्नुभयो, विदेश जाने भए मात्रै अझै पढ्नु भन्नुहुन्थ्यो, एसएलसी नै नदिएपनि हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर आमा उहाँको नाम चन्द्रमाया हो, उहाँले पढ्न निकै हौसला दिनु भयो । अहिले बुवाआमा म देखी निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’
२०७२ माघमा डिम्पलसँगको ९ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका राजन डिम्पल दम्पतीको हाल ५ बर्ष को छोरी र २बर्षका छोरा छन । राजन हाल नेपालमा नै पिएचडी गर्ने तयारीमा छन् । पुस्तक लेख्ने योजना पनि सुनाए उनले । सामाजिक क्षेत्रमा निकै सकृय र चर्चित उनी चांडै नेपालको राजनीतिक रजतपटमा छाउने र देशमा युवाको भूमिकालाई दरो रूपमा उभ्याउन बेजोड तयारी गरिरहेको बताउँछन्। शिक्षा र राजनीतिलाईनै आफ्नो जिवनको असली धरातल बनाउने प्रण गर्दै आज सम्मको यात्रामा साथ दिने सबैलाइ विशेष आभार प्रकट गर्दछु र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै साथको अपेक्षाका साथ छिट्टै देशमा शान्ति छाओस् भन्ने कामना गर्दछन्।
जांदाजांदै मनास्लु कलेजको बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छन:
मनास्लु वल्र्ड कलेजले स्थापनाको छोटो समयमा नै आफुलाई स्थापित भनिएका कलेजहरुसँग प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा चिनाउन सफल भैसकेको छ । फ्युचर लिडर उत्पादनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कलेजको‘अ होम फर फ्युचर लिडर्स’ भन्ने मुख्य नारा नै रहेको छ ।